गैडाको खाग सहित अर्घाखाँचीका तीन जना बुटवलबाट पक्राउ – Sansar Post
Home ≫ अपराध ≫ गैडाको खाग सहित अर्घाखाँचीका तीन जना बुटवलबाट पक्राउ
बुटवल, २३ मंसिर । गैंडाको खाग सहित रुपन्देही प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही मातहत ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार दिउसो ३ बजे बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित हरियाली होटल एण्ड लजबाट प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
गैडाको खाग कारोवार हुदै छ भन्ने बिशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले होटलको चौथो तलाको ११८ नं. कोठामा शंकास्पद रुपमा बसेका जिल्ला अर्घाखाँची छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं.७ सुर्यथुम बस्ने वर्ष ४८ को नर बहादुर सुनार, सोही ठाउं बस्ने वर्ष ५८ को पदम सुनार र वडा नं.५ रानीचाप बस्ने वर्ष २८ को सुमन न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले निजहरुको शरिर तलासी गर्दा सुमन न्यौपानेले लगाएको ज्याकेटको वायाँ भित्री गोजिमा कालो रङको ४ ईन्च गोलाई, ४ ईन्च लम्बाई भएको गैडाको खाग जस्तो चिज वस्तु बरामद गरेको छ । बरामद भएको खाग र पक्राउ परेका ब्यक्तिहरुलाई थप अनुसन्धानको लागि डिभिजन वन कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं.
२ पुष्पनरसिंह टोलबाट लागु औषध सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सोही ठाउं बस्ने बर्ष २० को जाबेद खानलाई लागु औषध नुफिन २४ एम्पुल, फेनारगन २४ एम्पुल र सेरि ज्याक २४ एम्पुल सहित पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले निजको साथबाट ९८६७१६६५३३ र ९८१४४३२२१४ नम्बरको सिम प्रयोग भएको किप्याड मोवाईल एक थान र विभिन्न दरका नोट ६ हजार समेत वरामद गरेको छ ।